» अन्ततः अन्तिम निर्णय यस्तो आयो,को सग बस्ने भए सचिन ? बाबा कि आमा ( हेर्नुस भिडियो) अन्ततः अन्तिम निर्णय यस्तो आयो,को सग बस्ने भए सचिन ? बाबा कि आमा ( हेर्नुस भिडियो) – हाम्रो खबर
अन्ततः अन्तिम निर्णय यस्तो आयो,को सग बस्ने भए सचिन ? बाबा कि आमा ( हेर्नुस भिडियो)
2021, April 18th, Sunday
काठमाडौँ | पछिल्लो सम”य मा के छ हजुर भनेर संसार भर चिनिएका सचिन परियारलाई जन्मदिने आमा पहिलो पटक मिडियामा आएकी छन्। सचिन को मुस्कान र बोलि को कारण उनि सनैको मन मा बस्न सफल भएका छन्। गुल्मी को एक कुनामा लिकेको आवाज लाई मि”डियाको सहायता मा बाहिर निकाल्न सग्फल भएका थिए। सानै उमेर देखि शिल स्वभाब को कारण सचिन अहिले धेरैको मन मुटुमा बस्न सफल भएका छन्।सचिनले अहिले सम्म धेरै गीत मा स्वर दिएका छन् भने धेरै भिडियो हरुमा पनि अभिनय गरिसकेका छन्। सबै”को प्यारो भएका सचिन को आमा पनि केहि दिन अगाडी मिडिया मा आएकी थीइन।
सचिनको आमा को भ’नाई अनुसार मेरो छोरा यहाँ सम्म आउँ पाउदा म धेरै नै खुसि भएकी छु , सधै भरि यसरि नै नाम राख्दै जाऒस ,, सधै सबैको यसरि नै प्यारो बन्दै जाहोस भनेकी छिन्।सचिनको बुवाले कान्छी श्रीमति ल्याएर आफुलाई घरबाट निकालेको भनेकि छन्। उता बुवाले उस्ले छाेडेर गए पछि छोरा छोरीको रेखदेख लगाई खुवाई गर्नका लागी सहरा चाइने भएका ले कान्छी श्रीमति ल्याएको बताएका छन् ऊनी भन्छिन उसले पैलेनै गुल्मी बस्दैमा अर्की श्री’मती ल्याई आफूलाई बेवास्ता गरेर बस्न नसकी हुनेको भनेकि छन् |
यो पनि,,,प्लिज! मेरो बुबालाई गा’ली नग’रिदिनु , मेरो बुबा राम्रो हु’नुहुन्छ भन्दै आए सचिन परियार मिडिया (भिडियो’सहित)काठमाडौं ।स’चिन को आमा सचिन लाई खो’ज्दै मिडिया मा आए ल’गत्तै सचिन को बुबा पनि आफ्नी कान्छी श्रीमती सहित मिडिया मा आएका छन्। सचिन का बुबा भन्छन मैले कान्छी श्रीमती ल्याएको मा मेरो ग’ल्ति छ। मैले दुई वटी श्रीमती बिहे गरे पनि दुई वटी लाई नै संगै राखेको हो , मैले दुई वटी लाई नै सु’ख दिने भनेको थिए उसलाई के मन परेन अनि ब’च्चा मलाई छो’डेर गएकी हो।सचिन लाई ज’न्म दिने आमा ले मिडिया मा आएर मैले बिहे गरेको छैन। छोरा छोरि को माया , उनीहरुलाई स’म्झेर म बिहे नगरी बसेको छु भनेर भनेको कुरा अहिले अहिले झु’ट भएको छ। उनले पनि सचिन को बुबा लाई छो’डी अर्को संग बिबाह गरेको खुले को छ। उनले छोराछोरि म बाट खो’सेर लगेको हो , मलाई घर बाट नि’कालेको हो भनेर भनेको कुरा सब झु’टो भएको छ।
सचिनको आमाले बुबा माथि झुट आरोप लगाए पछि सचिन को बुबा लाई धेरै गालि को लहरो आएको छ। आफ्नो बुबा लाई धेरै गालि गरे पछि सचिन ले रुदै मेरो बुबालाई नराम्रो केहि नभन्नु , मेरो बाबा धेरै राम्रो हुनहुन्छ। हामीलाई धेरै माया गर्नु हुन्छ भनि मिडिया मा आएका छन। सबैका प्यारा सचिन मनिलो अनुहार बनाउदै आफ्नो बुबालाई गाली नगर्न अनुरोध गरेका छन्सचिनको आमा सचिन लाई खो’ज्दै आए पछि सचिनको बुबालाई धेरै मानिसहरुले न”राम्रो भनेका छन्। पहिले मैले बिबाह गएको छैन मेरा छोरा छोरि खो’सेर ल’ग्यो भनेर आ’रो’प ल’गाएपछि सचिनको बुबाले धेरै नै गु’ना’सो गरेका छन्। छोराछोरि मसंग छो’डेर पहिले बि’बाह गरेर गई अहिले फेरी बिबाह गरेको छैन भनेर सो’जी बन्न खो’जेको होला। म मान्छे न’राम्रो भएर होला मलाई धेरै गा’लि आएको छ तर मैले मेरो ग’ल्ति सु’धा’रेको छु।
छोरा छोरि लगे म बि’बाह नगरी बसेको छु भनेकी सचिन कि आमाले अहिले बि’बाह गरेको छु भनेकी छिन्। यो कुरा सुने पछि सचिन को बुबा रि’स ले आ’क्रो’स भएका छन्। छोरा सानो हुदा वा’स्ता गरिने , अहिले छोरालाई सबैले चिनेपछि मेरो हात बाट लगेको हो भन्ने। छोरा लाई भे’ट्न मन भए आएर भे’टे भयो नि के मैले त्यसको घरमा लगेर ला छोरा हेर भ’न्ने हो र।आज सचिनको कान्छी आमा पनि मिडिया मा आएर आफ्ना गु’ना’सो पनि सु’नाएकी छिन्। मेरो श्री’मान ली दु’ई वटी श्री’मती बिबाह गरे पनि हामीलाई संगै राखेका थिए। उनलाई के कुरा मा म’न बु’झेन , हामी घर मा बस्थौ , उनि बजार मा बस्थिन। ल’क’डाउन मा खा’ने कुरा केहि थिएन , श्रीमान ले पनि दुई ठाउँ पु’र्या’उन न’सक्दा तेरा छोरा लिन आ’इजा मैले पा’लन स’क्दिन भने पछि म कहा लिएर आ’एका हुन्।
सचिन कि आमाले भने मि’डिया मा यी कुरा हरु भनेकी छिन। छोरा छोरि संगै छुट्टै बसेकी सचिनकी आमा बाट ए’का’एक छोराछोरि खो’सिए। सचिन का बुबा आमा छु’टिनु को कारण भने कपडा सिलाउने तेजेन्द्र लाई श्रीमती ले बुर्तिबाङ्ग नजानु भनेपछि उनि आफ्नै खु’सिले गएर अर्को बि’बाह गरे। घरमा भएकी श्री’मती लाई ख’बर नगरी अर्को बि’हे गरेपछि तेजेन्द्र बुर्तिबाङ्ग नै बसे। केहि काम ले गएका होलान भनि दिन हुदै महिना बि’तेपछि पहिलो श्री’मती ले छोरा छोरि आ’त्तिएका छन् घर आउनु भनेर फोन गर्दा अर्को बिहे गरेको भन्ने ख’बर पाए।
फोन मा पै’सा प’ठाउन भन्दा आज भोलि भन्दै ठ’ग्ने गरे , पछि उनि घर आएपछि मेरो छोरा छोरि मैले लैजान्छु। मेरी कान्छी बुढी ले छोरा छोरि पाल्छे त नि’स्केर जा म त’लाई स्वा’र्दिन भनेका थिए। मैले अरुको काम गरेर एक छा’क खाएको छु , मैले अहिले सम्म बि’बाह गरेको छैन , मलाई मेरो छोरा छोरि हेर्न भेट्न सारै मन छ मेरो हात मा मोबाईल पनि छैन। मलाई त चा’हिदैन मेरि कान्छी बुढीले स्वा’हार गर्छे भनेर लगेका थिए , तर प’ढाउन पनि सकेका थिएनन।